तलोत्तमामा खुल्ला व्यायमशाला - Sabal Post
तिलोत्तमा, असार २० । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा खुल्ला व्यायमशाला निर्माण हुने भएका छन् । बढ्दो सहरीकरणसँगै खुला ठाउँको अभाव भैरहेको बेला तिलोत्तमाले नागरिकलाई स्वस्थ्य बनाउन खुल्ला व्यायमशालाको अवधारणा ल्याएको हो । केही दिनभित्र वडा नं. ८ दीपनगर चोकमा पहिलो खुल्ला व्यायशाला निर्माण हुनेछ भने अन्य स्थानमा क्रमशः निर्माण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । दीपनगरमा निर्माण हुने व्यायमशालाका लागि आवश्यक सामाग्री तथा उपकरणहरु आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको छ । विभागका महानिर्देश डा. बासुदेव उपाध्यायले शनिबार तिलोत्तमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेलाई व्यायमशालामा आवश्यक सामाग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो । शारीरिक व्यायमको लागि चाहिने एक सेट उपकरणको मूल्य दश लाख रहेको जनाइएको छ ।
विभागबाट प्राप्त सामाग्रीलाई तोकिएबमोजिम व्यवस्थित तरिकाले जडान गरेर दीपनगरमा व्यायमशाला सञ्चालनमा ल्याइने नगर प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । शनिबार ती सामाग्रीको व्यायमशाला बन्ने स्थानमा प्रदर्शन समेत गरिएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा अन्य स्थानमा समेत खुल्ला व्यायमशाला बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । सामाग्री हस्तान्तरण गर्दै विभागका महानिर्देशक उपाध्यायले स्वस्थ जीवनको लागि शारीरिक व्यायमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले नगरपालिकालाई सामाग्री सहयोग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले व्यायमशालाको भरपूर उपयोग गरी स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रमुख बासुदेव घिमिरेले स्वस्थ नागरिक निर्माणको लागि नगरले खुल्ला व्यायमशालाको अवधारण अगाडि बढाएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । स्वस्थ जीवनशैलीको लागि व्यायमशाला अब टोल÷टोल हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले टोल विकास संस्थाले व्यवशालाको व्यवस्थापन तथा रेखदेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जनभावना माध्यामिक विद्यालय नजिकैको खुला स्थानमा निर्माण गरिने व्यायमशालामा एक पटकमा दश जनाले व्यायम गर्न सक्नेछन् । नगर उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरीले खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले व्यक्तिमा विभिन्न प्रकारका नसर्ने रोग बढेको बताउँदै स्वस्थ जीवनशैलीको लागि व्यायामशालाको महत्व अझै बढेको बताउनुभयो । उहाँले व्यायामशाला निर्माणले नियमित शारीरिक अभ्यास गर्न चाहने जोकोहीलाई सहज हुने बताउनुभयो ।
‘आइफा रद्ध हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालबारे नराम्रो सन्देश…
कालीगण्डकी पुल र लौजाको पहिरो निमार्ण कार्य…
सांसद रेशम चौधरी वीर अस्पतालमा भर्ना